Mofon’aina – ALAKAMISY 21 FEBROARY 2018 – Athis Fanantenana
Mofon’aina – ALAKAMISY 21 FEBROARY 2018
22 febroary 2018
1 Ny Fanambaran’ i Jesoa Kristy, izay nomen’ Andriamanitra Azy, mba hasehony amin’ ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana; ary naniraka ny anjeliny Izy hanambara amin’ i Jaona mpanompony,2 Izay nanambara ny tenin’ Andriamanitra sy ny filazana an’ i Jesoa Kristy, dia ny zavatra rehetra izay efa hitany.3 Sambatra izay mamaky sy ny mihaino ny tenin’ ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny; fa antomotra ny andro.
APOKALYPSY 1 :1-3
NY IRAK’ ANDRIAMANITRA
Aseho eto amin’ity fitarihan-tenin’ny Bokin’ny Apokalypsy ity maha-izy ny irak’ Andriamanitra .
1-Mihaino ary manambara
Ny fanambarany an’i Jesoa Kristy ho ren’ny olona rehetra no anjara fanompoana niantsoany ny mpanompony . Aseho eto fa mba hahatanteraka izany dia Andriamanitra Ray no manome torohevitra ny zanany ny amin’izay tokony hambara sy haseho . I Jesoa Kristy indray no manolotra sy mampahafantatra amin’ny olony izay tokony holazainy amin’ny fanirahany ny anjely. Noho izany , izay mahay mihaino no afaka mandray tsara ilay hafatra sy mampahafantatra izany. Isan’andro ianao dia mandray ny hafatr’ Andriamanitra. Meteza ho tena irak’ Andriamanitra hanambara izany amin’ny manodidina anao.
2-Maneho ny fikasan’ Andriamanitra
Tanjon’ Andriamanitra amin’ny fanirahana ny mpanompony ny hahatonga izao rehetra izao hahalala fa i Jesoa Kristy irery ihany no Mpamonjy . Noho izany , izay manaiky sy mihaino ary indrindra mitandrina , miaina amin’ny teny filazana ny amin’i Jesoa Kristy sy ny asany notanterahiny teto amin’izao tontolo izao dia mandray fiainana vaovao , manana ny fiainam-pahasambarana . Anjara fanompoana hanirahan’ Andriamanitra ny mpanompony araka izany ny haneho izany fikasan’ Andriamanitra izany .Koa raha nihaino ianao , fantatrao ny làlana mitondra ho amin’ny fiainam-pahasambarana dia lazao , ambarao amin’ny namanao izany .
Fantatrao ve ny andraikitra nifidianan’i Jesoa Kristy anao ?